Ogow sababta badanaa loo dhaho haddii nashqadeeyayaashu kaliya naqshadeeyaan | Abuurista khadka tooska ah
Mid kasta oo ka mid ah nashqadeeyayaasha akhriya tan ayaa maareysa baloog ama ugu yaraan nus mashruuc qof kale iyo ku saabsan kaliya 5% iyaga ka mid ah haddii ay ku dhajiyaan bartooda, taas oo runti ah a tirakoob aan macquul ahayn.
Badankood kuwa naqshadeeyayaasha ah ee iyagu waqti siiya akhrinta macluumaadkan ka soo qayb gal shirkaHaddii aad ugu yaraan leedahay bogag furitaanka ah oo lagu guuriyey buugga yar.
1 Ma ka mid tahay naqshadeeyayaasha runtii wax naqshadeeya?
2 Tayada shaqo la qabtaa waxay dhalisaa shaqo tayo leh
3 Macaamiishu waxay rabaan nabadgelyo
4 Marka (HAA / MAYA) Miyay naqshadeeyayaashu ku dhegaan naqshadda?
Ma ka mid tahay naqshadeeyayaasha runtii wax naqshadeeya?
Sidoo kale, inbadan oo naqshadeeyayaasha ah oo aqrinaya tan waxay leeyihiin ujeedo, mashruuc xoogaa sare ah ama ugu yaraan fikrad ka dhigaysa inay ka dhigaan xirfadlayaal naqshadeeya, gaar ahaan milkiilayaashaas oo runtii nashqadeeya. Isku soo wada duuboo, waxaa la dhihi karaa in dhamaan naqshadeeyayaasha runtii naqshadeeya ay waqti fiican ku qaataan waqtigooda iyagoo doonaya inaysan iyagu naqshadeyn.
Naqshadayaasha guud ahaan waxaa loo sheegaa in “sumcad ku hel”Si guul loo gaaro. Si la mid ah waxay u sheegaan inay wax ka qoraan naqshadeynta, ka hadlaan shirarka, wax ku soo kordhinaya bulshada, horumariya mashaariicdaada, waxaad ka heli doontaa iyaga in laguu "ogaado".
Tayada shaqo la qabtaa waxay dhalisaa shaqo tayo leh
Si kastaba ha noqotee, maareynta baloog mararka qaarkood waxay noqoneysaa a shaqo waqti buuxa ahMaaddaama bixinta muxaadarooyinku ay ficil ahaan u horseedeyso waqti badan oo aad ku maqnaato guriga, xaaladaha qaarkood waa dhowr maalmood laakiin xaaladaha kale, waxaa la joogaa waqtigii la maqnaan lahaa dhowr toddobaad. Saacad kasta oo lagu qaato mashruuc taasi si is barbar socda ayaa loo qabanayaa, waa hal saac ka yar in laga qaado shaqada weyn ee macaamiisha.
Naqshadeeye caan ah oo khibrad leh ayaa sidaas yidhi si loogu guuleysto abaalmarinno waa lagama maarmaan in loo qaabeeyo abaalmarinno, sikastaba wuu doortay naqshadeynta si loogu guuleysto macaamiisha.
Dhowr ka mid ah macaamiisha ugu daacadsan badanaa waxay ka yimaadaan isla hal meel, oo ah midka ay ku kasbadaan inay ahaadaan macaamiisha xoogaa duug ah oo kolba sannadaha ka dambeeya, dhowr naqshadeeyayaal ayaa nasiib u yeeshay inay helaan qaar ka mid ah macaamiisha noocan ah iyo guud ahaan, badankood wax baa ka dhexeeya oo waa wax aan ka ahayn ereyga afka. Haddii aad shaqo fiican u qabato hal macmiil, asxaabtooda ayaa weydiin doonta su'aalo ku saabsan nashqadeeyaha ay u kiraysteen inuu sameeyo, markaa ma heli doontid faa'iido oo keliya, laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa faa iidad la'aan tartan la'aan.
Qaabkan ayaynu odhan karnaa tayada shaqo waxay abuurtaa shaqo tayo leh.
Macaamiishu waxay rabaan nabadgelyo
Waa maxay tirada macaamiisha ee runtii u qalma inay si ku filan u xukumaan tayada naqshadeynta? Macaamiil badan ayaa doonaya amniga ay bixiyaan naqshadayaasha ugu abaalmarinta badan, sidaas awgeedna ay uga fogaanayaan go'aannada aan ogayn.
si haddii aad rabto inaad noqoto naqshadeeye ama haddii aad rabto inaad mid sii ahaato, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waa inaad waqti siisid inaad wax qorto, hadasho, kaqeybqaadato bulshada ama aad xoogga saarto tamartaada oo dhan inaad qabato shaqo heer sare ah.
Marka (HAA / MAYA) Miyay naqshadeeyayaashu ku dhegaan naqshadda?
Haa, tan iyo markii naqshadayntu waa farshaxan, in badan oo aad ku dhaqanto ayaa ka sii fiican.
Maya, naqshadayntu waa hal dhinac oo kale oo ah xirfad abuur aad u qoto dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Ma naqshadeeyayaashu runtii kaliya naqshadeeyaan?